“Opération bokiko” : hitety vohitra, hanentana amin’ny vaky boky | NewsMada
“Opération bokiko” : hitety vohitra, hanentana amin’ny vaky boky
Midina ifotony mihitsy ny fikambanana “Opération bokiko”, tarihin’i Michèle Rakotoson, mpanoratra tsy zovina intsony, manentana ny ankizy sy ny tanora hamaky boky.
Efa natomboka tany Toamasina sy Mahajanga izany, roa taona lasa izay. Nitety sekoly mihitsy ireo mpanentana ary mampiranty boky samihafa sy manao atrikasa.
Hitohy, manomboka amin’io volana jona io, izany hetsika “Foaran’ny boky” mitety vohitra izany, araka ny nambaran’i Michèle Rakotoson hatrany. Ankoatra izany, noho ny fiaraha-miasan’ny “Opération bokiko” amin’ny fiangonana katolika, hisy “Foaran’ny boky” ihany koa, mandritra ny Andro eran-tany ho an’ny tanora na ny JMJ, any Mahajanga.
Tsy mikely soroka ary feno finiavana ireo avy amin’ny “Opération bokiko” amin’ity fampiroboroboana ny vaky boky ity. Azo lazaina ho efa tratra izany tanjona izany. “Liana amin’ny boky ny olona, saingy ny vola hividianany boky no tsy misy”, hoy i Michèle Rakotoson.
Manoloana izany, ao anatin’ny tetikasan’ny fikambanana ny hamokatra boky kelikely nefa tsara sy mendrika ary mahasarika ny mpamaky. Hiara-dalana amin’izany ny fanofanana olona momba ny fanentanana sy ny fanapariahana ny boky. Ankoatra ireo, manohana ireo tanora manan-talenta amin’ny tontolon’ny asa soratra na koa manana tetikasa miompana amin’ny famelomana indray ny fahafaha-mamakafaka sy mandinika ny “Opération bokiko”. Tsiahivina fa efa namoaka boky miisa efatra izy ireo. Nahazo tohana tamin’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny frankofonia (OIF) izany. Mikasika izay indrindra, fandaharanasa midadasika ny an’ny “Opération bokiko”, mikasika ity fampiroboroboana ny vaky boky ity. Manoloana izany, sarotra dia sarotra ny mahita mpanohana amin’ny vola, araka ny nambaran’i Michèle Rakotoson hatrany.